Saingy tsy vita izany raha vao ianao mihitsy no tsy tena vonona ny hanadino akory. Ny fomba atao voalohany àry dia reseo lahatra aloha ny tenanao fa mahasoa anao kokoa ny manadino azy. Soraty an-taratasy mihitsy ireo antony tokony anadinoanao azy dia averimbereno vakiana mba hilentika tsara ao an-dohanao. Miaraka amin’izay, esory lavitra anao daholo izay zavatra rehetra mety mampahatsiahy azy : ny sariny, ny fanomezana avy any aminy… eny na dia ny nomeraon’ny findainy koa aza, ary esory tsy ho namanao ao anaty Facebook izy. Raha mitady ho lasa any aminy ny sainao dia mamorona zavatra atao : miaraka amin’ny namana, mamaky boky na mijery “film” tsy mamendrofendro, mianatra lesona… Farany, aza akana fahafinaretana ny mitadidy azy. Aza kolokoloina mihitsy ny alahelo fa atanjaho ny saina dia ho voafafan’ny fotoana tsikelikely ao am-ponao izy. Mety azo atao ihany ny miverina amin’ny olon-tiana taloha, raha toa ka samy mbola tia ianareo ary mbola mety ny hiarahana.
Vehivavy 21 taona aho , mbola tsy nanao firaisana ara-nofo mihitsy. Tsy maninona ve izany ? tsy mety mametraka olana ve ?
Tsy misy taonany voafaritra ny firosoana amin’ny firaisana ara-nofo. Miankina amin’ny fahavonanan’ny sainao, ny fonao sy ny vatanao io. Tsy misy tokony hanery anao amin’izany, na ny olon-tianao, na ny hevitry ny fiarahamonina, na ny namana… fa fanapahan-kevitrao samy irery izany. Aza mijery ny hafa, fa ny tenanao ihany henoina amin’io lafiny io, ka rehefa vonona ianao dia mirosoa, raha mbola tsy amin’izany ny fo amam-panahinao dia andraso ilay andro mahavonona anao sy ilay olona hitanao fa mendrika ny hamoizanao ny fahadiovanao.
Nisy mpiara-mianatra tamiko taloha izay, nilaza izy fa tia ahy. Izaho koa efa tia azy tamin’izany. Efa 10 volana anefa izahay no tsy nihaona ary hiahona indray ato ho ato. Matahotra be aho. Mba omeo toroevitra
Aza mihotakotaka am-boalohany fa mitonia aloha. Rehefa hihaona ianareo dia ataovy metimety ny endrikao ivelany mba ahafahanao mahazo aina tsara, amin’izay koa ianao matoky tena kokoa. Amboary ny saina mba tsy hitaintaina be loatra. Aza manantena loatra koa anefa hoe : mbola tsy miova ny fahitany anao sy ny fandraisany anao. Efa ela ihany manko izay folo volana izay ka tsy fantatra izay efa zava-nitranga teo anelanelany. Aza manao na inona na inona ,fa andraso izy no haneho ny fihetseham-pony, raha toa mbola misy izany. Raha tia anao izy dia tsy maintsy hiezaka hanao ny fomba rehetra hambaboana anao indray. Raha fehezina dia mijanona fotsiny amin’ny maha-ianao anao, aza miavonavona, aza manao hita be hoe : miandry hitoriana fitiavana, dia avelao handeha ho azy ny sisa.